July 5, 2019 - Update New
ဘဝမှာ မပူမပင် မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာနေနိုင်မည့် ဗုဒ္ဓယတြာ
July 5, 2019 Mg Naing 0
ဘဝမှာ မပူမပင် မကြောင့်မကြ အေးချမ်းစွာနေနိုင်မည့် ဗုဒ္ဓယတြာ နံနက် အိပ်ယာထချိန်တွင် မိမိတို့အိမ်တွင် ရှိသောမြတ်စွာဘုရားကိုမျက်နှာသစ်တော်ရေ၊သောက်တော်ရေချမ်းကပ်ပါ။ မျက်နှာသစ်တော်ရေနှင့် သောက်တော်ရေချမ်း ကပ်လှူသောအခါ… ဘဒ္ဒကမ္ဘာတွင် ပွင့်တော်မူသော သဗ္ဗညုတမြတ်စွာဘုရားကို ဘုရားတပည့်တော်၊ တပည့်တော်မသည် မျက်နှာသစ်တော်ရေနှင့် သောက်တော်ရေချမ်းကို သဒ္ဒါကြည်ဖြူစွာ နိဗ္ဗာန်ရည်မှန်း လှူဒါန်းပါသည် အရှင်မြတ်ဘုရား။ ဤကဲ့သို့လှူဒါန်းရသော […]
တောင်ကိုးရီးယား သမိုင်းတလျောက် အရက်စက်ဆုံး မုဒိမ်းမှု
တောင်ကိုးရီးယား သမိုင်းတလျောက် အရက်စက်ဆုံး မုဒိမ်းမှု..(2000-2005) ဖြစ်ရပ်မှန် ကို ပြန်လည် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဇာတ်ကားထဲက သရုပ်ဆောင် ရဲ့ ဓာက်ပုံဖြစ်ပါတယ်။ တကယ့် တရားခံ အစစ်မဟုတ်ပါ။ အဲဒီ အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာကတော့ ကျမ(စာရေးသူ) အခုနေတဲ့ ဂွမ်ဂျူးဆိုတဲ့မြို့လေးမှာပေါ့။အင်ဟွလို့အမည်ရှိတဲ့ ဆွံ့နားမကြား ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းကို သူတို့ […]
တောင်းစားရမှာရှက်လို့ အမှိုက်ပုံက စားကြွင်းစားကျန်တွေ တိတ်တိတ်လေး စားနေသော အဖိုး
တောင်းစားရမှာရှက်လို့ အမှိုက်ပုံက စားကြွင်းစားကျန်တွေ တိတ်တိတ်လေး စားနေသော အဖိုး အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၊ အရှေ့ဂျာဗားစီရင်စု၊ Pasar Besar မှာ သနားစဖွယ်အဖိုးအိုတစ်ယောက်ဟာ သူများတွေဆီကနေ တောင်းစားရမှာ ရှက်လို့ထင်ပါရဲ့၊ လူသူကင်းတဲ့ အမှိုက်ပုံးရှိရာကို တိတ်တိတ်ကလေးသွားပြီး၊ ရသမျှလေးတွေ ခြစ်ခြုပ်စားသောက်နေရှာပါတယ်။ ဒီအဖြစ်ကို လမ်းသွားလမ်းလာတစ်ဦးက မှတ်တမ်းတင်နိုင်ခဲ့ပြီး၊ Ipoh […]
ဆရာမ နှင်းနု နဲ့ သီးသန့် မေးမြန်းခန်း (ရုပ်သံ)
ဆရာမ နှင်းနု နဲ့ သီးသန့် မေးမြန်းခန်း “ကိုကို လုပ်တယ်လို့ ကျွန်မကို လာ မတိုင်ဘူးရှင့်။” “အဲဒီ ကိုကို ကိုလည်း ကျွန်မ မဆူ လိုက်ဘူးရှင့်။” ဒေါ်နှင်းနှင်းနု ဆရာမ၊ Wisdom Hill မူကြို နေပြည်တော် […]
ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဖြတ်ပိုင်းမှာ မီတာခ ကောက်တာကို ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ Paradiso ရုပ်ရှင်ရုံ လက်ရှိလူမှုကွန်ရက်မှာ လူပြောများနေတဲ့ Paradiso ရုပ်ရှင်ရုံက လက်မှတ်ဖြတ်ပိုင်းမှာ လက်မှတ်ဖိုးအပြင် Electric Charges ကိုပါထည့်သွင်း ကောက်ခံရခြင်းအကြောင်းနဲ့ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး Paradiso ရုပ်ရှင်ရုံက AGM ဦးသန်းဆွေက Cele7[…]
မုဒိမ်းမှုတရားခံဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ အောင်ကြီးရဲ့ မိဘများမှ ဝမ်းနည်းစွာ ရင်ဖွင့်လာမှုများ
မုဒိမ်းမှုတရားခံဟု စွပ်စွဲခံထားရသူ အောင်ကြီးရဲ့ မိဘများမှ ဝမ်းနည်းစွာ ရင်ဖွင့်လာမှုများ နေပြည်တော်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ၂နှစ်နဲ့၈လအရွယ် သက်ငယ်မဒိန်းမှုနှစ်ပက်သက်ပြီး လက်တလောဖြစ်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေအရ Wisdom Hillကိုယ်ပိုင်အထက်တန်းကျောင်း နေပြည်တော် သပြေကုန်းရက်ကွက်တွင် မှုကြိုကျောင်း တက်ရောက်နေသည် သမီးငယ်လေး Victoryဟာ မတရားကျုးလွန်ခံခဲံ့ရတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအမှုကို အချိန်တစ်လကျော်တိုင်အောင် […]
သိန်း ၅၀၀ ယူပြီး သူ့သားကို လူစားထိုးတာမဟုတ်ကြောင်း တရားခံအောင်ကြီး အမေရင်ဖွင့် (ရုပ်သံ)
သိန်း ၅၀၀ ယူပြီး သူ့သားကို လူစားထိုးတာမဟုတ်ကြောင်း တရားခံအောင်ကြီး အမေရင်ဖွင့် လက်ရှိ အွန်လိုင်း တခွင်မှာ ပျံ့နှံ့ နေတဲ့ နေပြည်တေယ် Wistom Hill ကျောင်းက ဗစ်တိုးရီးယား ကလေးမလေးရဲ့ သက်ငယ်မုဒိမ်းမှုကိုတော့ မသိတဲ့သူ မရှိလောက်ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ ဒီအမှုကတော့ တစထက်တစ လူစိတ်ဝင်စားမှု […]
မိုးကောင်းမြို့နယ်၌ ၁၅ နှစ်အရွယ်သမီးအရင်းအား ဖခင်ဖြစ်သူမှ အလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား
မိုးကောင်းမြို့နယ်၌ ၁၅ နှစ်အရွယ်သမီးအရင်းအား ဖခင်ဖြစ်သူမှ အလိုမတူပဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပွား ကချင်ပြည်နယ် မိုးကောင်းမြို့နယ် အင်ကြင်းကုန်းကျေးရွာ၌ ၁၅ နှစ်အရွယ်သမီးအရင်းအား ဖခင်ဖြစ်သူမှ အလိုမတူပဲ သားမယားပြုကျင့်မှုဖြစ်ပွားခဲ့၍ ဇူလိုင် ၅ ရက်က ပင်းဘောနယ်မြေရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်တိုင်တန်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မိုးကောင်းမြို့နယ်၊ […]
Victoria နဲ့ ယာဉ်မောင်း ရဲ့ DNA ကို စစ်ဖို့ သူမက ဒေါ်လာ ၂၀၀ ထည့်ပါတယ်ဆိုတဲ့ မော်ဒယ် နန်းသီရိမောင် ပရိသတ်တွေကိုဆွဲအားပြင်းပြင်း နဲ့ပုံရိပ်ကလေးတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်ထားတဲ့ နန်းသီရိမောင်ဟာဆိုရင် ပရိသတ်အခိုင်အမာရရှိထားတဲ့ သူလေးပါ။ အမိုက်စား Body နဲ့ ပုရိသတွေကြားမှာ နာမည်ကြီးနေတဲ့ […]
ဈေးသွားရင်ဘာချက်ရမလဲတွေးရတာ စိတ်ညစ်နေသူများ အတွက် (၅၉) ရက်စာ
ဈေးသွားရင်ဘာချက်ရမလဲတွေးရတာ စိတ်ညစ်နေသူများ အတွက် (၅၉) ရက်စာ (၁). ကြက်သားအာလူးဟင်း+ပဲကုလားဟင်း+ ကန်ဇွန်းရွက်ကြော်+ ဘာလချောင်ကြော် (၂). ငါးမွှေ+ဂေါ်ရခါးသီးချဉ်ရည်+ငရုပ်ပွကြော်+ ဘာလချောင်ကြော် (၃).ငါးဖယ်ငါးဆုတ်+ကျောက်ဖရုံသီးချဉ်ရည်+ရုံးပတီသီးကြော်+ငါးပိထောင်း (၄).ပုစွန် ဆီပြန်+ ကန်ဇွန်းရွက်ချဉ်ရည် +ပန်းဂေါ်ဖီကြက်ဥ+ငရုပ်သီးဆားထောင်း (၅). ဘဲဥဆီပြန်+ပဲရွက်ဟင်းချို+ကင်းပုံသီးချက်+ငံပြာရည်ချက်+တို့စရာ (၆). ပုစွန်ဘော့ချိတ်+ ဂေါ်ရခါးသီးအချိုချက်+မြင်းခွာရွက်သုတ်+ငါးပိချက် (၇).၀က်သနီချက်+ဘူးသီးချည်ရည်+ရွှေပဲသီးဥနီ+ဘာလချောင်ကြော် (၈). […]